Sunday April 15, 2018 - 20:23:22 in Wararka by Super Admin
Shirka oo amnigiisa si aad ah loo adkeeyay waxaa isugu yimid 14 Hoggaamiye oo katirsan dowladaha Carabta iyo wufuud ka socday dowladaha reergalbeed kuwaas oo kor joogte ka ahaa kulanka.
Hoggaamiyaal caan ah oo katirsan caalamka carabta ayaa shirka isaga baaqsaday sababa laxiriira khilaafaadka ragaadiyay dowladaha dabadhilifyada Khaliijka.
Shirka ayaa loo qorsheeyay in lagu qabto magaalada Riyaadh ee caasimadda u ah Sacuudiga balse sababa ammaan aawgeed ayaa looga wareejiyay kadib markii laga baqay in Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay sawaariikh ku weeraraan.
Hoggaamiyaasha ugu caansan ee shirka ka qeyb galay waxaa kamid ahaa Cabdi Fataax Alsiisi oo ah madaxweynaha Masar,Cumar Albashiir Hoggaamiyaha Suudaan iyo Boqor Cabdallaha 2-aad ee Urdun.
Ajandayaasha Hoggaamiyaasha Carabta horyiillay ayaa ahaa kuwa aad uliitay waxayna iska dhega tireen qadiyadaha muhiimka ah ee kajira caalamka islaamka gaar ahaan dalalka Carabta.
Markii ugu horraysay shirka Jaamacadda Carabta waxaan safka hore aan lageynin qadiyadda Filasdiin oo lafdhabar u ahaan jirtay shirarka ay isugu imaanayaan Hoggaamiyaasha Carabeed.
Madaxda jaamacadda Carabta ayaa isku mashquuliyay in si gaabis ah ay uga hadlaan dagaalka Yemen halka ay si qota dheer uga hadleen wax ay ugu yeereen amniga qaranka Carabta,ladagaallanka Argagaxisada iyo arrimo kale oo dhammaantood ahaa waqti lumis sida loollan ay sheegeen in ay kula jiraan dowladda iiraan.
Falanqeeyayaasha ayaa arrintan usababeeyay isbedelka dhanka siyaasadda ah ee xukuumadda Aala Sacuudi ku dhaqaaqday, Max'med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay in uu aqoonsanyahay maamulka Yahuudda wuxuuna yiri "shacabka Yahuudda xaq ayay uleeyihiin dhismaha dowladooda", wuxuu intaas sii raaciyay in dowladaha carabta ay dib usoo celin doonaan xiriirkii ay lalahaayeen Maamulka Yahuudda.
Arrima aan marnaba shirka lagusoo qaadin waxaa kamid ah xasuuqa joogta ah ee lagu haayo shucuubta muslimiinta Suuriya iyo Yemen sidoo kale waxba iskama dhihin hoggaamiyaasha Carbeed, qabsashada maleeshiyaadka shiicada iiraan magaalooyin badan oo katirsan wadanka Ciraaq oo dadka Sunniyiinta ah leeyihiin.
Hoggaamiyaasha Carabta ayaa khudbadihii ay jeediyeen ku celcelinaya ladagaallanka Argagaxisada iyo joojinta maalgelinta ay wax u ugu yeereen Kooxaha Xagjirayaasha ah.
Ciidamo Huwan ah oo dhaq dhaqaaq ka sameeyay Sh/Hoose [Warbixin].
Daahir Maxamuud Geelle oo iska Casilay Xilkii Wasiirnimo ee uu ka hayay Xukuumadda Kheyre.